सीमा अतिक्रमणबारे चुइँक्क नबोल्ने ओली सरकारलाई भारतको कडा जवाफ ! - Media Dabali
बुधवार, जेठ ११ २०७९May 25 2022
सीमा अतिक्रमणबारे चुइँक्क नबोल्ने ओली सरकारलाई भारतको कडा जवाफ !
आइतवार, बैशाख २८ २०७७
काठमाडौं – भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक उद््घाटन गरेको सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्त तरङ्गित बनेको छ ।
जनस्तरमा आलोचना भएपछि सरकारले समेत औपचारिकता निभाउन वक्तव्यवाजी गरिरहेको छ तर कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पहिल्यै थाहा हुँदाहुँदै पनि सडक निर्माण नरोकेको तथ्य सरकारी अधिकारीले नै बताइरहेका छन् ।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीले भारतले सडक खनिरहेकोबारे सरकारलाई पहिल्यैदेखि थाहा भएको खुलासा गरेका छन् ।
भारतले सीमा अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरिरहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि चुपचाप बस्ने ओली सरकारलाई भारतले कडा जवाफ दिएको छ । नेपाली भूमि लिपुलेकसम्म सडक खनेको भनेर नेपाल सरकारले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ ।
सीमाको विषय समाधान गर्न कोरोना संक्रमणको महामारी नियन्त्रण भएलगत्तै दुई देशबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता गर्न भारतले प्रस्ताव गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिले निर्माण भएको उद्घाटन भारतीय भूमिमा भएको दाबी गरेका छन् ।
भारतीय भूभागको बाटो कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय रुट पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेको उनले स्मरण गराएका छन् । ‘पहिले त्यही बाटोलाई तीर्थयात्री, व्यापारी र पर्यटकहरूको सहजताका लागि निर्माण गरिएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भारतले समेत सडक उद्घाटन भएको क्षेत्र पहिल्यैदेखि प्रयोग गरिरहेको दाबी गरेको छ । तर ओली सरकार भने चुपचाप बसिरहेको थियो ।
सीमासम्बन्धी विषय दुई देशका औपचारिक कूटनीतिक संवादमार्फत र नेपालसँगको निकट तथा मित्रवत् द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनाअनुसार समाधान गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
आइतवार, बैशाख २८ २०७७०६:५२:०९
वर्षाको ‘ए साथी सुन’को छायांकन सुरु
सभामुख सेटिङमा चलेको प्रधानमन्त्रीको आरोप
आउँदो चुनावमा दुई तिहाईका साथ फेरि सिंहदरबार फर्किन्छु : प्रधानमन्त्री
‘राजकुमारी’ महशुश गर्दै साम्राज्ञी
अर्थमन्त्रीलाई गगन थापाको प्रश्न : विदेशबाट फर्किने युवाका लागि ठोस योजना खै ?
ओली सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा पर्‍यो गम्भीर मुद्दा
सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्दा केपी ओलीको टाउको दुख्यो ! नेविसंघ कार्यकर्ता पक्राउ
पूर्व माओवादीहरूबीच आपसमै कुटाकुट, वडाध्यक्षले हिर्काएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष घाइते
Copyright © 2022 All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend Technology